Tababar Wood - GO! DUGSIGA SPECTRUM (BULSHADA TIME / BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
spectrum School > koorsooyinka our > Dhismaha & Wood > alwaax
ah Wakhti buuxa BSO-Education Wood helitaanka aqoontaada iyo waayo-aragnimada wax-qabad ee ku saabsan berrinka gudaha iyo dibedda qashin-saarka, wax-soo-saarka guriga iyo qurxinta gudaha. Tani waxay la socotaa layliyo. Waa mid tababar aad uwanaagsan oo leh maaddooyin guud oo yar. Inta badan waxaad tagtaa mashruuca bilaabista.
ah Heerka 2e Wood bartaan in ay ka shaqeeyaan mishiino ka samaysan alaabada iyo qalabka guryaha (qorshaynta iyo qalabka wax lagu qalajiyo, sawir wareega, ...). Waxaad baraneysaa oo isticimaal noocyo kala duwan oo qoryo iyo qalab. Waxaad baraneysaa aasaasiga aasaasiga ah ee qashin-qubka iyo najaariga iyo diyaarinta, isku-dubaridka iyo sameynta alaabta yar. Fikrado badan ayaa sidoo kale loo bixiyaa si waafaqsan sharciyada badbaadada.
ah Heerka 3e Wood Aqoonso aqoonta iyo waayo-aragnimada wax-qabadka labadaba marka la eego wax-soo-saarka alaabta guryaha iyo dibad-baxyada gudaha iyo dibadda. Seminarkeena waxaad baraneysaa dhammaan wejiyada 'udiyaar garaynta waxqabadka' si loo fuliyo: laga bilaabo qorsheynta, sawiridda, qiimeynta qiimaha si loo cabbiro iyo sameynta iyo dhamaystirka alaabta. Waxaad baraneysaa sida loo shaqeeyo loona ilaaliyo mashiinnada qalabka korontada.
Inta lagu jiro Layli waxaad heleysaa fursad balaadhan oo ah waxa aad taqaanid oo aad ku codsan karto ficil ahaan. Waxaad dhadhamineysaa xaalada dhabta ah ee shaqada ee shirkad alwaax ah. Sidan ayaad sii wadi kartaa xirfadahaaga si madax-bannaan oo shaqeynaya oo noqda mid ku haboon in la shaqeeyo mashiinada.
Waxaad mar walba bilaabi kartaa koorsada Wood, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad ka bilawdo shahaadada 2e. Waxaanu kaa rajeyneynaa inaad ubaahan tahay inaad barato oo saxdo oo aad noqoto qof xirfadle ah. Marka la eego makiinadaha aad ka shaqeyneyso tababarkan, nabadgelyadu aad ayay muhiim u tahay. Maskaxda ku hay in tababarka alwaaxku uusan ahayn fikrad fiican haddii aad alerjiga ku leedahay boodh, noocyo gaar ah oo qoryo iyo / ama wax soo saarka.
De heerka warshadaha ugu horeeya waa tababarka hordhaca ah.
Kadib shahaadada 3e alwaax waad heleysaa shahaadada ee Waxbarashada Sare. Hase yeeshee, waad haysataa ma ahan diblooma waxbarasho sare. Sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa inaad haysato mid 7e sannadka khaaska ah in la raaco. Dugsigeena waxaad ku takhasusi kartaa aagga daraasadda Wood Qurxinta gudaha. Ka dib markaad hesho Dibloomada waxbarashada dugsiga sare miyaad tahay shaqeeye dhuxul ah oo aad u shaqeynaya oo aad shaqo ku bilaabi karto goobta shaqada ama xitaa bilaabi kartaa ganacsigaaga.
Sannadka 3e ee kooban (36KB, .pdf)